မဟာဝံသ - ဝီကီပီးဒီးယား
မဟာဝင် (ပါဠိ: မဟာဝံသ; Mahāvaṃsa) သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ (သီဟိုဠ်ကျွန်း) ၏ သမိုင်းဝင်ရာဇဝင်ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်၍ ပါဠိဘာသာစကားကို အသုံးပြု၍ ကဗျာလင်္ကာရှည်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ရေးသားထားသည်။ ဒဏ္ဍာရီလာ မူလအစ (မဟာသမ္မတမင်း) မှ သီရိလင်္ကာ၊ အနုရာဓပူရမြို့၏ မဟာသေနမင်းလက်ထက် (အေဒီ ၃၀၂ သို့ ၃၀၄) အထိ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြထားရာ အိန္ဒိယမှ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဝိဇယ သိရိလင်္ကာသို့ ဘီစီ ၅၄၃ တွင် ရောက်ရှိလာပုံလည်းပါဝင်လေသည်။ နောက်ပိုင်း၌ ဤကျမ်းကို စာရေးသူများစွာက ခေတ်ကာလနှင့်အညီ မွမ်းမံခဲ့ကြသည်။ မဟာဝံသကျမ်းကို အေဒီငါးရာစုတွင် အနုရာဓပူရမြို့ရှိ မဟာဝိဟာရကျောင်းတွင် မဟာနာမ အမည်တွင်သော ရဟန်းတစ်ပါးက ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။
ပိဋကတ်မဟုတ်သော စာပေ; ရာဇဝင်ကျမ်း
၃ သမိုင်းနှင့် စာပေဆိုင်ရာအရေးပါမှု
၄ နိုင်ငံရေးအရ အရေးပါမှု
၅ သမိုင်းကြောင်း မှန်ကန်မှု
၆ ဆက်စပ်ကျမ်းစာ လက်ရာများ
၇.၂ ထုတ်ဝေမူများနှင့် ဘာသာပြန်များ
မဟာဝံသကျမ်းကို အဓိကအုပ်စုကြီး လေးခုဖြင့် တည်ဆောက်ရေးသားထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ :
ဗုဒ္ဓကိုယ်တော် သီရိလင်္ကာသို့ ကြွရောက်ခြင်း : ဤအပိုင်းတွင် ဘုရားရှင်သည် သီရိလင်္ကာသို့ သုံးကြိမ်ကြွရောက်သည့်အကြောင်းကို ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ဖော်ပြထားခြင်း၊ ဤဇာတ်လမ်းများ၌ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် လင်္ကာကျွန်းတွင် နေထိုင်နေကြသော ယက္ခနွယ်များ နှင့် နဂါးများကို နှိမ်နင်းတော်မူခြင်းနှင့် သီရိလင်္ကာသည် အရေးပါအရာရောက်သော ဗုဒ္ဓသာသနာနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟောပြောမိန့်ကြားခြင်းများပါဝင်ပြီး ဤသို့သောဇာတ်လမ်းများသည် ပါဠိပိဋကတ်စာပေများနှင့် အခြားရှေးဦးကျမ်းများ၌ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
သီရိလင်္ကာမင်းဆက်ရာဇဝင် : သီရိလင်္ကာမင်းများ၏ မျိုးနွယ်၊ ဆင်းသက်ပုံများပါဝင်ကာ ရံခါတွင် ဤတို့၏ နန်းခံခြင်း (သို့) သိသာထင်ရှားသော အဖြစ်ပျက်များကိုလည်း ဖော်ပြထားမှုရှိသည်။ ဤအပိုင်းသည် ပို၍ရှေးကျသော ရာဇဝင်များ၊ ဒေသယိဘာသာစကားများဖြင့် နှုတ်မှုရေးရာလက်ဆင့်ကမ်းလာကြသော မင်းဆက်စာရင်း စသည်တို့မှ ယူငင်ရေးသားထားဖွယ်ရှိ၍ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသမိုင်းအတွက်သာမက အနီးအပါးရှိ နိုင်ငံများ (ဥပမာ မြန်မာ) ရာဇဝင်သမိုင်းအတွက်လည်း အရေးပါသည်။
သံဃာသမိုင်း : ဤအပိုင်းသည် ဧကရာဇ်ရှင် အာသောကမင်း၏ သီရိလင်္ကာသို့ သာသနာပြုစေလွှတ်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ဗောဓိပင်ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မဟာဝိဟာရကျောင်းကြီးတည်ထောင်ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်လေသည်။ ထို့အပြင် လင်္ကာကျွန်းရှိ ထိုစဉ်က ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရဟန်း၊ ရဟန်းမများ၏ အမည်များလည်းဖော်ပြရေးသားထားကာ အစောပိုင်းသင်္ဂါယနာများ အကြောင်းလည်းပါဝင်ပေသည်။ ထို့နောက်အရေးတကြီးပါဝင်မှုတစ်ခုမှာ ပါဠိကျမ်းစာများကို ပေထက်အက္ခရာတင်ရေးသားခြင်းဖြစ်၏ ။ ထိုကြောင့်ယခုအပိုင်းသည် အစောပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်း (သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း) ၏ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမှု၊ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှသို့ သာသနာပြုများစေလွှတ်ရာတွင် စေလွှတ်ခံရသူ၏အမည်များပါဝင်လေရာ ထိုအမည်များကို ကျောက်စာများနှင့် အခြားရှေးဟောင်းသုတေသနရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများက သက်သေထူနိုင်ခဲ့ကြသည်။
သီရိလင်္ကာရာဇဝင်ကျမ်းများ : နောက်ဆုံးဖြစ်သော ဤအပိုင်းတွင် မင်းသားဝိဇယ အိန္ဒိယမှ ရောက်ရှိလာမှုဖြင့် စတင်ထားကာ မဟာသေနမင်းစိုးစံသောကာလအထိဖြစ်၏ ။ စစ်ပွဲများ၊ နန်းခံခြင်းဆိုင်ရာ သဘောထားကွဲလွဲ အငြင်းပွားမှုများ၊ စေတီနှင့် ဌာပနာ(တိုက်) များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အခြားသော အရေးပါသည့်ဖြစ်ရပ်များလည်းပါဝင်သည်။ သီဟိုဠ်ဘုရင် ဒုဋ္ဌဂါမဏိနှင့် တမီလ်ဘုရင် အလ္လရ တို့ကြား စစ်ပွဲကြီးနှင့်ပတ်သတ်သော ရာဇဝင်ကြောင်းကို အပိုဒ်ပေါင်း ၈၁၆ ပိုဒ်ဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြရေးသားထားခြင်းလည်းရှိရာ ဒေသယိရိုးရာစဉ်ဆက်များမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကဗျာရှည်ပုံစံအဖြစ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့နွဲ့ထားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
မဟာဝံသတွင် ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများစွာသည် ဒီပဝံသတွင် တွေ့ရှိရသော အကြောင်းအရာများကို ချဲ့ထွင်ခြင်းမှ ဆင်းသက်လာသော်လည်း "အဘယဂိရိဝိဟာရ" နှင့်ပတ်သက်သော စာပိုဒ်အချို့ပါဝင်မှုမရှိ၍ မဟာဝံသကျမ်းသည် မဟာဝိဟာရယအကြောင်းကိုသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပို၍ဖော်ပြထားသည်။
အနုရာဓပူရမဟာဝိဟာရယမှ ရဟန်းများက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ ရာဇဝင်ကျမ်းများကို ဘီစီ ၃ ရာစုမှစ၍ မပျောက်မပျက် ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကြသည်။ ဤသမိုင်းမှတ်တမ်းများကို အေဒီငါးရာစု အနုရာဓပုရမြို့၏ ဘုရင် ဓာတုသေနမင်း အုပ်စိုးစဉ်တွင် ပေါင်းစပ်၍ စာပေတစ်ခုတည်းဖြစ်စေရန် ပြုစုခဲ့ကြသည်။ အဋ္ဌကထာ (သီဟဠအဋ္ဌကထာ) ခေါ် ရှေးကျသော စာပေများစွာကို အခြေပြု၍ ရေးသားပြုစုခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် ဒီပဝံသ (၄ ရာစု) သည် "ဒီပ" ဟုခေါ်သော လင်္ကာဒီပ (ကျွန်း) ၏ ရာဇဝင်အကြောင်းဖြစ်၍ ပို၍ရှင်းလင်းကာ မဟာဝံသ ထက်ပို၍ အကြောင်းရာပါဝင်မှုနည်းလေသည်။ ဒီပဝံသကိုလည်း အဋ္ဌကထာများပေါ်အခြေတည်၍ ဖွဲ့ဟန်တူသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။
မဟာဝံသဋီကာအလိုအားဖြင့် "မဟာဝံသကျမ်း"ကို မဟာနာမ ခေါ် ရဟန်းတော်တစ်ပါးက ရေးသားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဒီဃသန္ဒသေနာပတိ (စစ်သူကြီး) ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ကျောင်းတွင် မဟာနာမ နေထိုင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားက မဟာဝိဟာရ ကျောင်းကြီးနှင့်လည်း ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ထိုရဟန်းနှင့်ပတ်သက်သော အခြားယုံကြည်အားထားလောက်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုမူ မသိရှိကြပေ။ မဟာနာမ မထေရ်က မဟာဝံသ၌ စတင်ရေးသားပုံမှာ "ရှေးခေတ်လူများ ရေးသားပြုစုခဲ့သည့် ရာဇဝင်ကျမ်းများ၌ ချို့ယွင်းချက်များ၊ (အကြောင်းအရာကို) ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြထားမှုများကို ပြင်ဆင်ပေးရန်ဟူ၍ဖြစ်ကာ ရှေးခေတ်ရာဇဝင်ကျမ်းများ ဆိုသည်မှာ သီဟာဠအဋ္ဌကထာ (သို့) ဒီပဝံသ ကိုရည်ညှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ဆက်စပ်အတွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် စူဠဝံသ (ရာဇဝင်ငယ် ; Culavamsa) ကို သီဟိုဠ်ရဟန်းများက ပြုစုခဲ့ကြကာ လေးရာစုမှ သီရိလင်္ကာကို ဗြိတိသျှများ သိမ်းပိုက်သည့်နှစ် ၁၈၁၅ အထိ အကြောင်းအရာများပါဝင်လေသည်။ စူဠဝံသကိုကား ခေတ်အဆက်ဆက်မှ မြောက်များစွာသော စာဆိုတော်တို့က ရေးသားပြုစုခဲ့ကြသည်။
ထောင်စုနှစ် နှစ်ခုစာပမာဏကို (အဆက်အခြားမရှိ) လွှမ်းခြုံနိုင်သည့် ဤနှစ်တွဲကိုပင် "မဟာဝံသ" ဟူ၍ ရံခါ၌ ညွှန်းဆိုကြပြီး ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး တောက်လျှောက်(မကျိုးမပြတ်သည့်) ရာဇဝင်ကျမ်းများထဲက တစ်ခုဟု သတ်မှတ်ယူဆကြပေသည်။ ကာလိင်္ဂတိုင်း၊ သိင်္ဃပူရမြို့မှ မင်းသားဝိဇယ မရောက်မီ လင်္ကာကျွန်း၏ မူလဇာတိနေထိုင်ကြသော နဂါးနွယ်၊ ယက္ခနွယ်များနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများပါဝင်သည့် အနည်းအကျဉ်းသာရှိသောစာပေများထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယဒေသ၏ မင်းဆက်များကို ဖော်ပြထားသောကြောင့်လည်း မဟာဝံသကျမ်းသည် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ရှိ ခေတ်ပြိုင်မင်းဆက်များကို ခေတ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ဖော်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်လိုသော သမိုင်းပညာရှင်များအတွက် လွန်စွာတန်ဖိုးရှိသည်သာမက မောရိယမင်းဆက် ဧကရာဇ် အာသောကမင်း၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများကို ခေတ်၊ နှစ်သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း အရေးပါ၏ ။ ထို့ကြောင့် မဟာအလက်ဇန္ဒြားခေတ် နှင့် အစ်လူးဆစ်အင်ပါယာခေတ် (ဆီးရီးယားနှင့်အနောက်အာရှပိုင်း) တို့နှင့် အာသောကခေတ်တို့ငို နှိုင်းယှဉ်၊ ယှဉ်တွဲ၍ ခေတ်ဖော်ပြရာ၌ အရေးပါသည်။
ဆန်ချီစေတီတော်၊ အခြားသောနေရာများမှ တူးဖော်မှုများသည် မဟာဝံသကျမ်းပါ အာသောကမင်း၏ အင်ပါယာနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရများကို အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ မဟာဝံသ၌ဆိုထားသော ဖော်ပြချက်များကို အခြားသော ကျောက်စာများ၊ အထူးသဖြင့် သီဟိုဠိုတွင် တွေ့ရသော ကျောက်စာအထောက်အထားများက ကျယ်ပြန့်စွာ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည်။ သမိုင်းနှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် ကေ အိန္ဒြာပါလ (K. Indrapala) သည် မဟာဝံသကျမ်းစာ၏ သမိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးကို အတည်ပြုထောက်ခံခဲ့သည်။ မဟာဝံသကျမ်းကြောင့်သာလျှင် ရုဝံဝေလိသယစေတီ၊ ဇေတဝနရာမယစေတီ၊ အဘယဂိရိဝိဟာရနှင့် အခြားသော ရှေးဟောင်းလက်ရာများကဲ့သို့သော အနုရာဓပုရမြို့ရှိ အလွန်ကြီးမားသော စေတီတော်ကြီးများ အကြောင်းကို သိရှိရပေသည်။
မဟာဝံသကျမ်းသည် ပထမဆုံးအနောက်နိုင်ငံသားတို့၏ အာရုံကျရာဖြစ်လာသည်မှာ ၁၈၀၉ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်ကဖြစ်ကာ ထိုနှစ်များတွင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သော သီဟိုဠ်၏ တရားသူကြီးချုပ် အလက်ဇန္ဒား ဂျွန်စတန်က မဟာဝံသနှင့်ပတ်သက်သောစာမူများ၊ အခြားသီရိလင်္ကာ ရာဇဝင်ကျမ်းများကို ဥရောပသို့ စာအုပ်ထုတ်ဝေရန် ပို့ပေးခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ပညာရှင် အူဂျဲန် ဘူယနုဖ် (Eugène Burnouf) က ၁၈၂၆ တွင် ရောမအက္ခရာသို့ဖလှယ်၍ လက်တင်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အများစိတ်ဝင်စားမှု မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့၏ ။:86 ဂျွန်စတန်၏ စာမူများမှနေ၍ အဒ်ဝါ့ဒ် အာ့ပ်ဟမ်း (Edward Upham)က အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း ဘာသာပြန် အမှားအယွင်းမြောက်များစွာပါဝင်ရာ ဥပမာအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓသည် သီရိလင်္ကာတွင် ဖွားမြင်ခဲ့၍ အာဒမ်တောင်ထိပ်တွင် ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟူသော ညွှန်းဆိုချက်များ ဖြစ်သည်။:86 ပထမဆုံးပုံနှိပ်မူဖြစ်ကာ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖတ်ရှုသည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မူကို ၁၈၃၇ တွင် သီရိလင်္ကာအရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သော သမိုင်းကျွမ်းကျင်သူ ဂျော့ဂျ် တားနာ (George Turnour) က ထုတ်ဝေခဲ့သည်။:86
ဂျာမန်ဘာသာပြန်မူကို ဗစ်လ်ဟမ် ဂိုက်ဂါ (Wilhelm Geiger) က ၁၉၁၂ တွင် ပြန်ဆိုပြီးစီးသည်။ဤမူကိုပင် မေဘယ်လ် ဟေးနက်စ်က အင်္ဂလိပ်သို့ ပြန်ဆိုခဲ့၍ ဂိုက်ဂါက စိစစ်တည်းဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
သမိုင်းရေးသားခြင်းဆိုင်ရာရင်းမြစ်များသည် တောင်အာရှတခွင်တွင် ရှားပါးလှ၏ ။ မဟာဝံသကြောင့်သာ သီဟိုဠ်ကျွန်းနှင့် အနီးနားဒေသများ၏သမိုင်းကို အိန္ဒိယတိုက်ငယ်၏ အခြားအပိုင်းများ၏သမိုင်းထက်ပို၍ သိရှိရသည်။ ကျမ်းစာပါစာများသည် ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ နေရာများ၊ အစောပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပတ်သက်သော ကျောက်စာများ၊ အာသောကမင်း၏ အင်ပါယာ၊ တောင်အိန္ဒိယရှိ တမီလ်နိုင်ငံများ စသည်တို့ကို ခွဲခြားအတည်ပြုရာတွင် အကူအညီအများအပြားဖြစ်စေခဲ့သည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အစောပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းများကို မဟာဝံသက ခြုံငုံဖော်ပြထားရာ ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ခေတ်ကာလမှ စတင်ရေးသားထားသည်။ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံသည်မှ အေဒီသုံးရာစုအထိ အိန္ဒိယ၏ ရှေးဦးဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းကိုလည်း အကျဉ်းမျှတင်ပြထားသည်။ မဟာဝံသပါ အခန်းတိုင်းကို "နက်ရှိုင်းသက်ဝင်ယုံကြည်သော သုခချမ်းသာဖြင့်" ဟုအဆုံးသတ်သည်။ အနုရာဓပူရမဟာဝိစာရယကျောင်းကြီး၏ ဒါယကာတော်များဖြစ်သော ဘုရင်မင်းများ၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို ပြုစုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းနှင့် ကျမ်း၏ဖော်ပြအလေးပေးထားခြင်း အရ သီဟိုဠ်အမျိုးသားရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်ရန်ဟု ဆိုကြသည်။
မဟာဝံသကျမ်းသည် သမိုင်းဆိုင်ရာ အရေးပါသောရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်သာမက ပါဠိဘာသာဖြင့် ဖွဲ့ဆိုခဲ့သော အရေးပါဆုံး ကဗျာလင်္ကာရှည်တစ်ခုလည်းဖြစ်၏ ။ တိုက်ပွဲများ၊ နန်းရေးနန်းရာ ကြံစည်မှုများ၊ စေတီကြီးများနှင့် ရေကာတာကြီးများ တည်ဆောက်မှု စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော ဇာတ်လမ်းများအကြောင်းကို နှစ်လိုဖွယ် ကဗျာစာပိုဒ်များဖြင့် ရေးသားသီကုံးထားသောကြောင့် အလွတ်ကျတ်မှတ်ရန်အတွက်သင့်တော်သည့်အပြင် ထိုခေတ်ထိုအခါက ဗုဒ္ဓဘာသာအဝန်းအဝိုင်း၏ စိတ်အာရုံကိုလည်း ဖမ်းသားနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ၎င်းထက်ပိုရှေးကျသော ကျမ်းစာများစွာနှင့် မတူသည်မှာ မဟာဝံသသည် သာမန်လူထုဘဝ၏ အသွင်အမျိုးမျိုး၊ ထိုလူထုက ဘုရင့်စစ်တပ်ကို ဝင်ရောက်လာပုံ (သို့) စိုက်ပျိုးမွေးမြူကြပုံ တို့ကို ဆွေးနွေးဖော်ပြထားလေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် ဤကျမ်းစာကို ပိုးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်များသို့ ယူဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျမ်းစာပါအကြောင်းအရာများကို အခြားဘာသာစားများဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ ပြန်လည်ဟောပြောခြင်းများ၊ လေ့ကျင့်သင်အံခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေ၏ ။ အသေးစိတ်များကို တင်ပြထားသော ချဲ့ထွင်ထားသည့် မဟာဝံ့သမူတစ်ခုကို အရှေ့တောင်အာရှတွင်လည်းပဲ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မဟာဝံသကျမ်းကြီးသည် အခြားအခြားသော ပါဠိရာဇဝင်များကိုလည်း အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့ရာ ထိုခေတ်ကာလက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို ပါဠိစာပေ၏ ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် သင်ကြားသင်ယူသော ဌာနေတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့သည်မှာ ဖြစ်တန်ရာ၏ ။
မဟာဝံသကျမ်းသည် အထူးသဖြင့် ခေတ်သစ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအရ သတင်းစကားပါဝင်သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားမှုရှိသည်။ သီဟိုဠ်သားတို့ကား မဟာဝံသကိုပင် လက်ကိုင်ပြု၍ သီရိလင်္ကာသည် ရှေးကတည်းက သီဟဠတို့၏ တိုင်းပြည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြပေသည်။
ဗြိတိသျှသမိုင်းဆရာ ဂျိန်း ရဆဲလ်က "မဟာဝံသ ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်စဉ်"သည် ၁၉၃၀ နှစ်များဆီက စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့၍ တမီလ်အမျိုးသားရေးဝါဒ လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပိုင်းက စတင်သည်ဟု ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ သီဟဠဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ သမိုင်းဖြစ်သော ဤကျမ်းသည် သီဟဠတို့၏ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု ဇာတ်လမ်းကြီးအဖြစ် တမီလ်အမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့် သီဟဠအမျိုးသားရေးဝါဒီများအကြောင်းအဖြစ် ရုတ်ချည်းဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့သည်။ ယင်းအမြင်ကို ၁၉၃၀ နှစ်များဆီက ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူမှာ တမီလ်အမျိုးသားရေးဝါဒီကိုယ်စားလှယ် ဂျီ ဂျီ ပုဏ္ဏန်ဘာလမ် (G. G. Ponnambalam) ဖြစ်၍ သီဟဠဘုရင်များဖြစ်သော ဝိဇယ၊ ကဿပ (Kasyapa - ကတ်ရှပ)၊ ပရာကရာမာဘာဟု (Parakramabahu) စသည့်ဘုရင်များသည် အမှန်စင်စစ် တမီလ်လူမျိုးများဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့၏ ။ ပုဏ္ဏန်ဘာလမ်က နဝလာပီတိယ (Nawalapitiya) မြို့၌ ၁၉၃၉ တွင် "သီရိလင်္ကာသည် သီဟိုဠ် ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဆိုသည့် အဆိုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ထိုတိုက်ခိုက်မှုကို သီဟိုဠ်သားများက သီဟဠဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်တည်ထောင်ခြင်းအယူအဆကို ဆန့်ကျင်သည်ဟုဆိုကာ လူအုပ်များဖြင့် နဝလာပီတိယ၊ ပဿရ (Passara) ၊ မက်ကေလိယာနှင့် တမီလ်နယ်ဖြစ်သော ဂျက်ဖ်နား (Jaffna) မြို့များသို့ ဝိုင်းခဲ့ကြလေသည်။:148
အော်တို ဖရန်ကာ (Otto Franke) ကဲ့သို့ အစောပိုင်းအနောက်တိုင်းပညာရှင်များက မဟာဝံသကျမ်းတွင် ယုံကြည်နိုင်လောက်သော သမိုင်းကြောင်းပါဝင်မှုရှိသည်ဆိုသော ဖြစ်နိုင်ချေများကို ပယ်ချခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကျောက်စာများ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများမှ နောက်ဆက်တွဲ သက်သေအထောက်အထားများက အတည်ပြုခိုင်မာစေသည်မှာ အာသောကမင်း၏ သာသနာပြုစေလွှတ်မှု၊ များစွာသော ကျောင်းတိုက်၊ စေတီပုထိုးများတည်ထောင်မှုတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကြသောမင်းများ အပါအဝင် မဟာဝံသ၌ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဇာတ်လမ်းကြောင်းရာများစွာအတွက် မှန်ကန်သည့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။:47,90
ဗစ်လ်ဟဲလ်မ် ဂိုက်ဂါ (Wilhelm Geiger) ဆိုသူသည် ဤကျမ်း၏ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် တင်စားချက်နှင့် ကဗျာအဖွဲ့အနွဲ့တို့ကို သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် သပ်သပ်ခွဲထုတ်နိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်၏ဟု အကြံပြုခဲ့သည့် ပထမဆုံး အနောက်တိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစာသည် အိန္ဒိယပါဠိစာပေရင်းမြစ်များမှ ချေးယူသုံးစွဲ စီစဉ်ထားသည်ဟု အခြားပညာရှင်မျက ယူဆကြသော်လည်း ဂိုက်ဂါက သီရိလင်္ကာကျွန်းတွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော အစောပိုင်း သီဟဠစာပေရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် အခြေခံသည်ဟု မှန်းဆသည်။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်၊ အမည်နာမများဖြင့် ဖော်ထုတ်ရေးသားထားသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဂိုက်ဂါအနေဖြင့် ယုံကြည်မှုမရှိသော်လည်းပဲ အခြားပညာရှင်များနှင့် အယူအဆကွဲပြားစွာကာ မဟာဝံသသည် အစောပိုင်းစာပေကို ရောင်ပြန်ဟပ်ညွှန်းဆိုနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ပါဝင်သော အစောပိုင်းစာပေများသည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သော ဘုရင်များ၏ အမည်၊ ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းထား၍ သူရဲကောင်းဖွဲ့ စာပေသက်သက်မဟုတ်ပေ။ ထို့နောက် ၎င်းကပင် စူဠဝံသ၏ ရှေ့ပိုင်းအခန်းများသည် သမိုင်းအရ အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ကာ မဟာဝံသ၏ ရှေ့ပိုင်းအခန်းများသည်ကား သမိုင်းအမှန်နှင့် လွန်စွာကွာဟ၍ စူဠဝံသ၏ နောက်ပိုင်းအခန်းများမှာမူ အလွန်တန်ဆာဆင်ချဲ့ထွင်ထားသည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။:90–92
ဂိုက်ဂါ၏ သိဟဠကျောင်းသား မန်ဒစ် (G. C. Mendis) သည် အထူးသဖြင့် မင်းသားဝိဇယအကြောင်း ဇာတ်လမ်းကို ကိုးကား၍ ကျမ်းစာပါ အချို့သောအပိုင်းများကို ပို၍ပင် သံသယဖြစ်ခဲ့ကာ ထိုအကြောင်းများသည် သမိုင်းအမှန်နှင့် လွန်စွာကွာဟလွန်းကာ ကဗျာလင်္ကာ/စာပေဆိုင်ရာ ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့နွဲ့ပုံစံဆန်လွန်း၍ သမိုင်းအဖြစ် ယူဆ၍မဖြစ်နိုင်လောက်သောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်၊:94 ဝိဇယ၏ လင်္ကာကျွန်းသို့ ရောက်ရှိလာမှုအား ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နှစ် ဘီစီ ၅၄၃ ဝန်းကျင်နှင့် တိုက်ဆိုင်စေရန် ပကတိအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ တီထွင်ကြံဆခဲ့သည်ဟု ယူဆကြသည်။ တရုတ်ဘုရားဖူးခရီးသွား ဖားရှင် (Fa Hsien) နှင့် ရွှမ်ဇန့် (Hsuan Tsang) တို့သည် သိဟဠလူမျိုးတို့၏ မူလဇာစ်မြစ် ဒဏ္ဍာရီများကို ခရီးသွားမှတ်တမမးများတွင် ရေးမှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် မဟာဝံသကျမ်းပါ အချက်အလက်နှင့် သိသိသာသာ ကွဲပြားလျက် ရှိသည်။ မူတစ်ခုတွင် သဟဠသားတို့သည် နဂါးမျိုးနွယ် (သို့) နတ်မျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟုဆိုထားကာ အခြားမူတစ်ခု၌ ကုံလုံကြွယ်ဝသော သူကြွယ်တစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ထိုသူကြွယ်၏ ကလေး (၅၀၀) ကို မွေးစားခဲ့၍ ထိုလူသတ်မှုဖြင့် နယ်နှင်ဒဏ်ခံရသော မင်းသားတစ်ပါးမှ ဆင်းသက်လာ၏ဟု ရေးသားထားသည်။:58–9
ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်၏ သီရိလင်္ကာသို့ သုံးကြိမ်ကြွချီမှုအကြောင်းကို မဟာဝံသ၏ ပြင်ပရှိ မည်သည့်စာပေတွင်မျှ မှတ်တမ်းပြုထားခြင်းမရှိပေ။:48 ထို့ထက်ပို၍ မဟာဝံသ၌ဖော်ပြထားသော ဗုဒ္ဓ၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ပြသမှုအပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓသည် မောင်နှမလေးယောက် အိမ်ထောင်ပြု၍ မွေးလာသောသူအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ မောင်နှမ/ဝမ်းကွဲများ အိမ်ထောင်ပြုသည့် ဓလေ့သည် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရှိ ဒြာဗီးဒီးယန်း (Dravidian : ဒြာဝီဒီယန်, ဒြဝိဍ) တို့နှင့် ဆက်နွှယ်မှုများရှိကာ သိရိလင်္ကာရှိ တမီလ်များနှင့် သိဟဠသားတို့သည်လည်း ဤဓလေ့ကို ကျင့်သုံးကြသည်။ သို့သော် သွေးသားရင်းမဟုတ်သော အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် ဗုဒ္ဓခေတ်အခါ၌ မြောက်ပိုင်းတွင် ကျင့်သုံးသော ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မောင်နှမချင်း လက်ထပ်သည့်ကြောင်းရာများကို အစောပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ပညာရှင်များက ဤမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ပြပုံကို သီရိလင်္ကာ၏ ရိုးရာလူနေမှုပုံစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် တီထွင်ထားသည်ဟု ဆိုကြသည်။:48–9 သို့ရာတွင် ထေရဝါဒပိဋကတ်များ၌ ဝမ်းကွဲချင်း လက်ထပ်ထိမ်းများမှုများသည် ဗုဒ္ဓခေတ်အခါက အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ ဥပမာဆိုလျှင် သုဒ္ဓေါဒနမင်းနှင့် မာယာဒေဝီတို့မှာ ဝမ်းကွဲမောင်နှမတော်စပ်ကြသည်။
မဟိန္ဒမထေရ်လာရောက်ခဲ့ပြီး သီရိလင်္ကာမင်းကို ဗုဒ္ဓသာသနာသို့ သွတ်သွင်းပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်ဆိုသော သမိုင်းအမှန်နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေတင်အငြင်းပွားဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုစာတမ်း၊ စာအုပ်များ ထုတ်ဝေခဲ့၍ ပါဠိကျမ်းစာများစွာကို ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူ၊ အိန္ဒိယစာ အိန္ဒိယမှု (Indology) ပညာရှင် ဂျာမန်သား ဟားမန်း အောလ်ဒန်ဘာ့ဂ် (Hermann Oldenberg) သည် ဤဇာတ်လမ်းအဖြစ်အပျက်ကို "ထွင်လုံး" ဟုယူဆသည်။ ဗီ အေ စမစ်သ် (အာသောက၊ ရှေးအိန္ဒိယသမိုင်း စအုပ်များရေးသူ) က ကြောင်းကျိုးမဆီဟုတွေးမြင်၍ ၎င်းနှင့် ဟားမန်းတို့က ဤသို့သုံးသပ်မှုပြသည်။ အာသောကမင်းသည် ၎င်း၏ (၁၃) နှစ်မြောက် ကျောက်စာ (Rock-Edict XIII - ကျောက်စာအမှတ် ၁၃) တွင် သားတော် မဟိန္ဒကို ရဟန်းဖြစ်ရန် ကျောင်းသို့မစေလွှတ်၊ သီရိလင်္ကာမင်းကို ဘာသာပြောင်းစေရန် မဟိန္ဒဆောင်ရွက်သည့်ကဏ္ဍတို့သည် ကျောက်စာ၌မပါဟုသော အချက်အပေါ်မှနေ၍ သုံးသပ်ချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မဟာဝံသနှင့် သီရိလင်္ကာစာပေများ၏ ပြင်ပ၌ရှိသည့် ရင်းမြစ်များသည်ကား မဟိန္ဒသည် အာသောကမင်း၏ သားဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဟု ဆိုကြသည်။
အာသောကမင်း၏ သီရိလင်္ကာသို့ သာသနာပြုလွှတ်သော ခုနှစ်သည်လည်း မကိုက်ပေ။ မဟာဝံသ၌ဆိုသည်မှာ ဘီစီ (၂၅၅) ဟုဖော်ပြထားသော်လည်း ကျောက်စာ (၁၃) အရ ဘီစီ (၂၆၀) ဆိုရေးသားထားသောကြောင့် ငါးနှစ်ကွာလျက် ရှိသည်။
မဟာဝံသကျမ်းစာသည် ဒီပဝံသ (အေဒီ ၄ ရာစု) အမည်ရှိသော ပို၍စောသည့်ကျမ်းစာမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဒီပဝံသကျမ်းသည် ဤကျမ်းထက် ပို၍ ရိုးရှင်းကာ အချက်လက်ပမာဏပါဝင်မှုလည်း နည်းပါး၍ ယခင်ကာလများဆီက နှုတ်မှုရေးရာအကြောင်းများ၏ အဓိကသော့ချက်ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့မည်။ နောက်ဆုံး၌ ထိုနှုတ်မှုရေးရာများ ပေါင်းစပ်၍ မဟာဝံသကျမ်းအဖြစ် ပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမည်။ ဒီပဝံသသည် သီဟိုဠ်ကျွန်းတွင် အပြည့်အစုံ ရေးသားခဲ့သည့် ပထမဆုံး ပါဠိကျမ်းဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆကြလေသည်။
နောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာသော လက်ရာတစ်ခုမှာ ကုလဝံသ အဖြစ်အသိများ၍ မဟာဝံသကို ချဲ့ထွင်ထားပြီး အနုရာဓပူရ၏ မဟာသေနမင်း (၂၇၇-၃၀၄ ရာစု) မှ ၁၈၁၅ အထိကာလများကို ဖော်ပြထားသည်။ ၁၈၁၅ တွင် ကျွန်းတစ်ခုလုံးသည် ဗြိတိသျှတို့အောက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ကုလဝံသတွင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါ၍ စာရေးသူ ငါးဦးတို့က ၎င်းတို့၏ ခေတ်အသီးသီးအကြောင်းကို ရေးသားထားကြသည်။
၁၉၃၅ ၌ ယာဂီရာလာ ပညာနန္ဒက သီဟဠဘာသာဖြင့် မဟာဝံသ အပိုင်း ၃ ကိုဖြန့်ချိခဲ့၍ ခေတ်ကာလအနေဖြင့် ကုလဝံသကျမ်း၏ အဆုံးသတ်နှစ်မှ ၁၉၃၅ အထိ လွှမ်းခြုံဖော်ပြထားသည်။:95–104 ထိုစဉ်က အစိုးရ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများက ထောက်ခံ အတည်မပြုခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် သီရိလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ် ဂျေအာ ဇယဝါဒေနေ (JR Jayawardene) က အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
မဟာဝံသဋီကာကို ကုလဝံသ ဖြည့်စွက်ချက်များမပြုခင် အေဒီ ၁,၀၀၀ နှင့် ၁,၂၅၀ ကြားကာလတစ်ခုခု၌ ရေးသားခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ဤဋီကာသည် မဟာဝံသတွင် သုံးစွဲထားသော အနက်မပြတ်သားသည့် ပါဠိဝေါဟာရများ၏ ရှင်းလင်းချက်ကို တင်ပြထား၍ မဟာဝံသမူကွဲအမျိုးမျိုးမှ ခြားနားချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည့်အပြင် နောက်တိုးအသေးစိတ်များကိုလည်း ရံခါ၌ ပံ့ပိုးရေးသားထားပေသည်။ မဟာဝံသသည် မဟာဝိဟာရကျောင်းတော်မှ ရင်းမြစ်စာပေများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းမှုများ၍ ဤဋီကာသည် အဘယဂိရိဝိဟာရနှင့် ဆက်စပ်သော ကွဲပြားခြားနားသည့် ရာဇဝင်ကျမ်းများ၊ အခြားဋီကာအချို့တို့ကို ကိုးကားပြုရေးသားထားသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပါဠိစာပေတစ်ခုမှာ မစာဝံသကျမ်းကို ချဲ့ထွင်ထားသည့် စာပေတစ်ခုရှိ၍ ယင်းကျမ်းစာတွင် မူရင်းမဟာဝံသကျမ်းသာမကာ အမျိုးမျိုးသော ဇာတကများမှ ကျမ်းကိုးယူထားခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဝံသ (ဗုဒ္ဓဝင်) ၊ ထူပါဝံသ (Thupavamsa) တို့မှ ကြောင်းရာများလည်း ပါဝင်လေသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာပေအသိုင်းဝိုင်းတွင် ကမ်ပူးချား (သို့) ခမာ မဟာဝံသ ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြရာ အကြောင်းမှာ ခမာဘာသာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်၏ ။ မောဂ္ဂလာန (သို့ အမည်မသိရှိ) အမည်တွင်သည့် ရဟန်းတစ်ပါးက စပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ထင်ကြကာ ပြစုသည့်နှစ်၊ ဇာစ်မြစ်များကိုကား မသိရှိပေ။ ဇာစ်မြစ်မှာ မြန်မာ (သို့) ထိုင်းနိုင်ငံ တစ်ခုခုမှ ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြပေသည်။
↑ Sailendra Nath Sen (1 January 1999)။ Ancient Indian History and Civilization။ New Age International။ p. 91။ ISBN 978-81-224-1198-0။
↑ ၂.၀၀ ၂.၀၁ ၂.၀၂ ၂.၀၃ ၂.၀၄ ၂.၀၅ ၂.၀၆ ၂.၀၇ ၂.၀၈ ၂.၀၉ ၂.၁၀ Von Hinüber၊ Oskar (1997)။ A Handbook of Pali Literature (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်) (1st Indian ed.)။ New Delhi: Munishiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.။ pp. 87–93။ ISBN 81-215-0778-2။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "Hinüber_Pali_handbook" defined multiple times with different content
↑ Tripāṭhī၊ Śrīdhara, ed. (2008)။ Encyclopaedia of Pali Literature: The Pali canon။ 1။ Anmol။ p. 117။ ISBN 9788126135608။
↑ Harris၊ Elizabeth (2006)။ Theravada Buddhism and the British Encounter: Religious, Missionary and Colonial Experience in Nineteenth Century Sri Lanka (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်) (1st ed.)။ New York: Routledge။ pp. 12။ ISBN 0415544424။
↑ ၇.၀၀ ၇.၀၁ ၇.၀၂ ၇.၀၃ ၇.၀၄ ၇.၀၅ ၇.၀၆ ၇.၀၇ ၇.၀၈ ၇.၀၉ ၇.၁၀ Kemper၊ Steven (1992)။ The Presence of the Past: Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်) (1st ed.)။ Ithaca, NY: Cornell University Press။ pp. 33။ ISBN 0801423953။
↑ Mahavamsa။ Ceylon Government။ 1912။
↑ In general, regarding the Mahavamsa's point-of-view, see Bartholomeusz, Tessa J. (2002)။ In Defense of Dharma: Just-war Ideology in Buddhist Sri Lanka။ London: RoutledgeCurzon။ ISBN 978-0-7007-1681-4။
↑ Senewiratne, Brian။ "Independence Day: A Day For Action, Not Mourning"၊4February 2012။
↑ E. F. C. Ludowyk's discussion of the connection between religion in the Mahavamsa and state-power is discussed in Scott, David (1994)။ "Historicizing Tradition"။ Formations of Ritual: Colonial and Anthropological Discourses on the Sinhala Yaktovil။ Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press။ pp. 191–192။ ISBN 978-0-8166-2255-9။ .
↑ "Mahavamsa, the great chronicle"၊ Sunday Observer၊ 29 June 2008။ 1 May 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2February 2016။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Dr. Hema Goonatilake, Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka. 2003
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Communal politics under the Donoughmore Constitution, 1931–1947, Tissara Publishers, Colombo 1982
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Thomas R. Trautmann. “Consanguineous Marriage in Pali Literature.” Journal of the American Oriental Society, vol. 93, no. 2, 1973, pp. 158–180. JSTOR, www.jstor.org/stable/598890. Accessed 14 May 2020.
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ Wilhelm Geiger (1912). Mahavamsa: Great Chronicle of Ceylon. New Dehli: Asian Educational Services. 16-20.
↑ von Hinuber 1997.
Tripathi၊ Sridhara (2008)။ Encyclopaedia of Pali Literature။ 1။
Malalasekera၊ Gunapala Piyasena (2003)။ Dictionary of Pali Proper Names။ Asian Educational Services။ ISBN 978-81-206-1823-7။
Oldenberg၊ Hermann (1879)။ Dipavamsa။ Asian Educational Services။ ISBN 978-81-206-0217-5။
von Hinüber၊ Oskar (1997)။ A Handbook of Palic Literature (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ India။ ISBN 81-215-0778-2။
Murphey, Rhodes (February 1957). "The Ruin of Ancient Ceylon". The Journal of Asian Studies 16 (2): 181–200. Association for Asian Studies. doi:10.2307/2941377.
Kosuta, Matthews (2019). "King Naresuan's Victory in Elephant Duel". Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 34 (3): 578–606. ISEAS - Yusof Ishak Institute. doi:10.1355/sj34-3d.
Matthews, Bruce (1979). "The Problem of Communalism in Contemporary Burma and Sri Lanka".
Shtrathern, Alan (2014). "Vijaya and Romulus: Interpreting the Origin myths of Sri Lanka and Rome". Journal of the Royal Asiatic Society 24 (1): 51–73.
Blackburn, M. (2015). "Buddhist Connections in the Indian Ocean: Changes in Monastic Mobility, 1000-1500". Journal of the Economic and Social History of the Orient 58 (3): 237–266. doi:10.1163/15685209-12341374.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာဝံသ&oldid=697189" မှ ရယူရန်
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။